Kedu Ka Synephrine HCL Si Arụ Ọrụ Gị?
1. HCL Synephrine (5985-28-4) Eziokwu
2. Nkọwa Synephrine
3. Kedu ihe bụ Synephrine (5985-28-4)?
4. Mmezi nke Synephrine HCL ntụ ntụ
5. Uru nke Synephrine
6. Mmebi nke Synephrine
7. A na-atụ aro iji ọgwụgwọ Synephrine
8. Isi isiokwu maka mkparịta ụka: Synephrine vs Caffeine
9. Ịzụta Ihe Ịnweta Ume Synephrine Ntanetị
10. Nchikota na Synephrine (5985-28-4)
HCL Synephrine (5985-28-4) Eziokwu
Synephrine (5985-28-4) bụ alkaloid nke a na-ejikarị emepụta ihe mgbakwunye Synephrine HCL. Nke a na-agụnye eziokwu Synephrine, akụkọ Synephrine, synephrine HCL usoro ihe, uru ahụike nke synephrine, nwere mmetụta / ihe ize ndụ nke synephrine na synephrine na-atụ aro ya.
The ojiji nke Synephrine (Ihe: 5985-28-4, nke a maara dịka para Synephrine, ma ọ bụ p-Synephrine) laghachiri na ọtụtụ afọ gara aga, a pụkwara ịchọtaghachi ya na China. Uru ọgwụ nke Synephrine bụ chọpụtara na mpaghara ebe mbụ ọ na-eji na-emeso ọrịa ndị na-egbuke egbuke dị ka ọgbụgbọ na afọ ntachi. Ọzọkwa, ndị Brazil oge ochie ji Synephrine mee ihe dịka ihe ngwọta maka ịda ụra, nchekasị na nkwarụ.
Osisi ohia dị ilu, nke a chọtara n'Esia na Mediterranean.
Ihe ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị na-emekarị na onye ọ bụla nke na-ezube iji Synephrine kwesịrị ịma banyere mkpụrụ nke sitere na ya (sitere na mkpụrụ osisi ocha).
Mkpụrụ ahụ nwekwara chemical ndị ọzọ n'etiti ha bụ ephedrine. Otú ọ dị, ịta ahụhụ nke ihe ikpeazụ ahụ abụghị obere.
Mkpụrụ osisi oroma na-egbu egbu adịwo ogologo oge, ọ na-ejikwa ya eme ihe naghachi na obodo Eshia ebe a na-ejikarị eme ihe banyere nsogbu afọ. Ọ dịkwa ukwuu na akụkụ nke Eastern Africa.
Na omenala, a na-eji oma ocha na-emeso ọgbụgbọ, afọ ntachi, na afọ ojuju. Na Mediterenian, a na-eji ya eme ihe nrịkasị obi, na-akwalite ọnwụ ọnwụ ma belata agụụ. A na-ejikarị mmanụ ya eme ihe mgbe ụfọdụ, ma a na-ejikarị ya eme ihe.
Mkparịta ụka gbara gburugburu Synephrine
Enwere ntụpọ nke synephrine ruo ogologo oge nke mgbagwoju anya maka ihe ndị ọzọ yiri ya. Ihe mgbagwoju anya a di oke nkpa na obuna ufodu ndi akwukwo sayensi a ma ama bu ihe siri ike ikwuputa ebe kwesiri ikpo oku a. Ụfọdụ n'ime ihe ndị yiri ya ma dị iche na Synephrine gụnyere ihe ndị a:
Epepụ mmanụ oroma. Nke a bụ isi iyi nke Synephrine. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ka na-amaghị na ndị ọzọ karịa chemical a, e nwere ihe ndị ọzọ na-ewepu na yiri Synephrine ma dị nnọọ iche na usoro nke usoro ha. N'ihi nke a, a maara oroma oroma dịka ihe ngwọta a pụrụ ịdabere na ya maka ịgwọ ọrịa dịgasị iche iche na ọgwụ ndị dị mkpa maka ịgwọ ọrịa ndị a dị iche na p-Synephrine.
Phenylphrine. Nke a na-arụ ọrụ na Synephrine, ma usoro ha dị iche iche. Ọ bụ ezie na a na-eji Synephrine mee ka ahụ dịkwuo mma n'ahụ site na thermogenesis, a na-eji phenylephrine mee ihe dị ka onye na-edozi anụ. A na-ejikwa chemical phenylephrine na-arụ ọrụ ịwa ahụ iji dilata nwa anya anya n'oge ọrụ. A na-emepụta Phenylphrine synthetically. N'aka nke ọzọ, a na-enweta Synephrine, site na mkpokọta osisi.
Ephedrine. A chọpụtakwara mkpụrụ osisi oroma dị oke oke nwere Ephedrine dị ịrịba ama. Ephedrine bụ ihe siri ike na-akwalite ma jiri ihe ọ na-eji eme ihe dị ka ọ na-eri ahụ ike.
Uzo nke ephedrine na-akpali akpali yiri nke Synephrine, nke a bụ isi ihe mgbagwoju anya nke kemịkal abụọ ahụ. Otú ọ dị, a na-egbochi ephedrine n'ọtụtụ ebe maka mmetụta ọjọọ ya na ụmụ mmadụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị were Synephrine n'enweghị ikike. N'aka nke ọzọ, ojiji nke Synephrine adịghị ebu mmetụta ọ bụla yiri ya, a na-ewere ya dị ka ihe nchekwa dị mma ma e jiri ya tụnyere ephedrine.
Ọdịdị Synephrine dị ugbu a
Ugbu a, Synephrine na Ihe mgbakwunye Synephrine ejiri mee ihe maka iche iche ebumnuche n'etiti ha bụ maka mmelite nke metabolism. Ihe na-akpali akpali na-eme ka usoro thermogenesis dịkwuo elu site na nke a na-agbajupụta abụba ndị dị n'ime ahụ iji mee ka akwara.
Ahụ na-azaghachi nke a site na ịmepụta anya nke ọma. Ihe na-akpali akpali na-enyekwara ndị mmadụ aka ịnọgide na-enwe ezi ahụ ike ma na-akwado nkwadobe kwesịrị ekwesị.
Ihe dị mma bụ Synephrine HCL ntụ ntụ?
Nchebe nke Synephrine HCL ntụ ntụ adịghị enwe obi abụọ ọ bụla dịka ọ bụ ihe gbasara ihe ndị ọzọ na-akpali akpali. Nke a bụ n'ihi na a nwalere ọgwụ ahụ ugboro ugboro, a chọpụtakwara ya dịka onye na-adịghị njọ ma ọ bụrụ na mmadụ ejiri usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị.
Ihe kachasị atụ anya na-eme mgbe eji ihe ọ bụla na-akpali akpali bụ mmepe nke ọbara mgbali elu bụ nke na-ejikọta ọnụ ọgụgụ na-adịghị ahụkebe ngwa ngwa. Otú ọ dị, iji Synephrine ga-emepụta ihe dịgasị iche iche. Nke a na-eme ka ọ dị iche ma dị mma ịhọrọ ọgwụ ndị dị mma na-eme nke ọma bụ ndị dị n'ahịa taa.
Otú ọ dị, ụfọdụ nnyocha na-egosi na caffeine dị na ya synephrine HCL ntụ ntụ O nwere ike ime ka o nwee mmerụ obi. Ka o sina dị, ndị nchọpụta ndị ọzọ achọpụtala na ọ gaghị ekwe omume. Anyị ga-ahụ banyere arụrịta ụka ahụ ebe e mesịrị na.
FDA enyeghị ịdọ aka ná ntị ọ bụla gbasara oriri Synephrine. N'ezie, na mba ụfọdụ, a na-agba ume iji Synephrine eme ihe n'ebe ephedrine nọ. Nke a bụ n'ihi nchegbu nchedo nke ana ebili mgbe eji eriri ephedrine bụ nke dị ike nke na-akpali akpali. Nke a na-eme ka o yie ka ọ ga-enwe ike ịmalite ọbara mgbali elu na ọnụ ọgụgụ ụba obi.
Nweta synehrine dị mma (5985-28-4) nyocha site na obese
HCL nke Synephrine na-eji emepụta ọtụtụ nyocha. Ọ bụ ezie na e nwere ihe ole na ole na-adịghị mma, ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ nwere obi ụtọ na ihe mgbakwunye ahụ enyerela ha aka inweta karịsịa ndị na-achọ ịṅụbiga abụba anụ ahụ. Ụfọdụ n'ime ihe ndị ha na-ekwu gụnyere ihe ndị a:
James Shaw : James Shaw bụ 44 dị afọ ndụ na Liverpool, England. Ọ na-ekwu, sị, "Anwụrụ m oke ugbua ruo oge ụfọdụ, nsogbu a na-enye m nsogbu karịsịa karịsịa mgbe m na-echeta ahụ ahụ nke ọma m nwere n'oge m dị afọ iri atọ. Enwere m ọbara mgbali elu ruo ihe dị ka afọ ise ugbu a, ọ na-atụkwa m egwu mgbe ọ bụla m na-eji emeju ka nsogbu m nwere ike njọ. " Yohimbine: Na-eji mmetụta + Yohimbine na-ere
"Ebu ụzọ nye m 20mg kwa ụbọchị, nke a ji nwayọọ nwayọọ mụbaa ka dọkịta ahụ na-enweta ọnọdụ m. N'ụzọ dị mwute, ọ dịghị ihe ọ bụla dị njọ mere n'oge ahụ, ahụ m dịkwa mma ruo n'ókè nke m na-atụghị anya ya. Taa, enwere m ike iji obi ụtọ na-ejegharị n'enweghị ihere maka ọdịdị ahụ m. M ga-akwado iji Synephrine mee ihe nye onye ọ bụla nwere nsogbu dị oke mkpa n'enweghị obi abụọ ọbụla banyere ihe ọ rụpụtara. "Ọ na-agbakwụnye.
Katlego Muphulukuzi: Katlego Muphulukuzi bụ onye 29 dị afọ si South Africa. Mgbe o jiri Synephrine, nke a bụ ihe ọ ga - ekwu, sị, "Ịhụnanya m maka ndị okenye na-arịsi nnọọ ike site na mgbe m malitere iji mgbakwunye Synephrine. M na-enwe mmetụta siri ike karịa mgbe ọ bụla ọzọ. M debara aha na mgbatị ahụ, n'ime ọnwa isii, ahụ m agbanweela nke ukwuu; M na-ele anya mara mma. "
Paul McLaughlin na-arụ ọrụ n'otu ọkà mmụta ọgwụ na Chicago, Illinois: "Anọla m ọgwụ na-ere ahịa ruo afọ asaa. Ná mmalite, anyị na-ere ephedrine, nke ahụ bụkwa otu n'ime ọgwụ ndị kacha ere ahịa na ụlọ ahịa ahụ. Ọnọdụ ahụ gbanwere mgbe ndị ọchịchị na-achịkwa ọgwụ ọjọọ na-abịakwute anyị maka ire ere ihe a machibidoro. Anyị ga-ekpochapụ ephedrine site na shelves ma ọ bụkwanụ, ọ ga-abụ na a ga-emechi ya. Mgbe nke a gasịrị, nnukwu mgbagwoju anya banyere otú onye na-aṅụ ọgwụ ga-esi na-agba ọsọ n'enweghị otu n'ime ngwaahịa ndị kachasị ere.
Ọ na-agbakwụnye na, "Naanị oge a, okwu gbara gburugburu na Synephrine bụ ihe ọhụrụ iji dochie ephedrine. Enweghị m n'onwe m na ihe ọ bụla nwere ike dochie ephedrine ma reviews ndị m nwetara n'aka ndị ahịa mere ka m kwụsịtụ iche echiche. Ndị mmadụ bịara na-achọ maka mgbakwunye ahụ na ọnụ ọgụgụ dị egwu. Ihe kacha juo anya bu na ọbụna ndị m na-echeghi na ha nwere ike iji ụdị mkpali dị otú ahụ bịakwara. Ọbụna ụfọdụ na-ede akwụkwọ ọgwụ iji zụta mgbakwụnye ahụ.
Anyị na-ere ahịa okpukpu atọ n'ime ihe na-erughị otu afọ ma ruo ugbu a, Synephrine bụ ihe ngwongwo kachasị dị na chemist. Aga m akwado onye ọ bụla nwere nnukwu nsogbu iji jiri ọgwụ. Agaghị m eme nke ahụ iji kwalite ahịa m. Ọ bụ n'ihi na enwere m ihe onye a ga-esi na-eji ihe mgbakwunye eme ihe. "Paul nọ na Synephrine ugbu a. "
Sharon: "Achọ m ka m nwee ike ịde foto m tupu oge amalitere iji Synephrine. Emechara m nwee ike iru nrọ m, obi dịkwa m ụtọ maka ya. M ga-akwado Synephrine nye onye ọ bụla chọrọ ịkwụsị ibu n'ebughị ọgụ. "
Paul Luol Deng: Paul na-ekwu, sị, "Enwere m ihe isi ike karị karịsịa ndị inyom na-achọ ịkwụsị ibu. N'adịghị ka ụmụ nwoke, ha na-achọkarị iji steroid dị ka ha na-atụ egwu na ha nwere ike imetụta usoro ọmụmụ ha. "
Ọ gbakwunyere, sị, "Ana m eji Synephrine eri ogologo oge, ha arụkwara m ọrụ nke ọma. Otu ụbọchị, otu onye enyi si US gara ileta mgbatị m ma gwa m ka m gbalịa ịnwale Synephrine HCL na ndị ahịa m. Nke a achọghị ka o doo anya dịka ọ bụ mmeju, n'adịghị ka ndị steroid nke m gbalịrị ịme ha na mbụ. Ndị ahịa ole na ole mbụ zuru ezu iji mee ka ndị ọzọ kwenye banyere irè nke mmeju ahụ. Ọ na-arụ ọrụ ebube, ha na-etinyekwa ibu arọ ngwa ngwa ka m jikọtara ha ọgwụ na obere caffeine iji mee ya ngwa ngwa. Ụbọchị ndị a, onye ọ bụla chọrọ ịnweta ihe mgbakwunye anwansi a ọbụna ndị ikom ahụ. "
Emily: "Enwere M ekele maka Phcoker maka ihe mgbakwunye Synephrine ha zigaara m ọnwa abụọ gara aga. Agụụ m adịla ntakịrị ma amalitela m inwe mgbanwe dị mkpa n'ahụ m ruo n'ókè dị arọ. Ruo ezigbo mma. "
Vanessa Ford : Vanessa Ford na-ekwu, sị, "Enweghị ezigbo obi ụtọ karịa HCL Synephrine. Na mbido, echere m na ọ bụ ihe na-adịghị ike na-akpali akpali nke na-agaghị enye m mmetụta ọ bụla dị mma karịa ịṅụ kọfị m. Otú ọ dị, ihe isii nke isii gwara m ka m gbalịa. Emere m ihe mbụ m zụtara, mgbe m malitekwara usoro ọgwụgwọ ahụ, ihe malitere ịdị iche. Ana m agbasi ike na onye nkụzi m na-eme egwuregwu na-eche ebe mmetụ ihe si bịa. Anọgidere m na-eji mgbakwụnye ahụ mee oge, ihe niile m nwere ike ikwu bụ na ọ dịghị mma dị mma karịa Synephrine HCL. " Orlistat maka ụkọ ọnwụ: Olee otú ọ ga-esi wepụ ngwa ngwa ngwa ngwa?
Fredrick: "Enwere m ike ịhapụ ihe karịrị kilo ise maka afọ ikpeazụ gara aga, n'ihi mgbakwụnye Synephrine mgbagwoju anya. Enweghị m ikele ekele maka enyi ahụ nke kpọbatara m ha. Ha bụ ihe kachasị mma na-ere ọkụ nke m maara. "
Synephrine (5985-28-4) bụ alkaloid nke a na-ejikarị emepụta ihe mgbakwunye Synephrine HCL.
A na-enwetakarị synephrine ka ọ bụrụ mkpụrụ osisi oroma dị arọ nke na-etinye uche na chemical. Otú ọ dị, mkpụrụ a abụghị nanị ebe e si mara alkaloid. Ndị ọzọ citrus mkpụrụ dị otú ahụ dịka a chọpụtala na lemons nwere Synephrine ntụ ntụ ọ bụ ezie na ọ dị na obere oge.
Synephrine bụ ezigbo anụ ọkụ na-enyere ya aka arọ ọnwụ. Ọ pụkwara ime ka ọbara mgbali elu ma nke a nwere ike ịbụ nchegbu nye ndị nwere nsogbu obi.
Mmezi nke Synephrine HCL ntụ ntụ
Ụdị Synephrine nke ihe omume na-akọwa mmetụta dị iche iche nke mmeju ahụ na-eme ka ọtụtụ mmadụ dị. Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime mmetụta ndị a site na nke ahụ na-emesị nwetaghachi ọdịdị dị iche n'ile anya n'ihu ahụ:
1. Mmetụta nke metabolism
Nke a bụ isi ihe omume nke chemical. Ọgwụ ga-eme ka ọnyá thermogenesis mụbaa. A na-eme nke a n'ime imeju, na mkpụrụ ahụ na-emekarị ka ike dịkwuo n'ahụ nke bụ ọchịchọ kachasị nke onye ọ bụla na-eme egwuregwu.
A na-eme ihe Synephrine na ụmụ oke, a na-ahụkwa ihe ndị na-esonụ dịka ihe na-eme n'ime mmadụ:
Enwere mbelata glucose na glycogen. Ndị a bụ isi iyi nke ike na ahụ. N'ihi ya, ha na-atụ anya na ha ga-eme mgbanwe ọhụrụ na ume.
A naghị eme ka ndị na-eto eto nọ n'anụ ahụ dị na abụba. Maka onye ọ bụla na-emepụta ihe, inweta abụba bụ ihe ikpeazụ ha ga-achọ. Kama nke ahụ, onye ọ bụla chọrọ ikpochapụ abụba ndị ahụ ma gbanwee ya na uru.
Ngbanwe a na - eme mgbe ọ dịkwuo elu mgbe a na - eji ntinye inye ume. Nke a na-eme ka Synephrine bụrụ ihe mgbakwunye bara uru maka ịrụ ọrụ ọ bụla nke na-eme ka ndị na-eme egwuregwu gbasaa.
Ọnụ ọgụgụ nke ATP dị n'ime imeju nke ụmụ oke na-arịwanye elu nke ukwuu. Ngbanwe a bara uru iji meziwanye ọnụ ọgụgụ nke mmeghachi omume ndị dị na ahụ a. Ọ bụrụ na ọnụego arụ ọrụ ka mma, nkwụsị nke abụba na-apụta na ọnụ ọgụgụ dị ngwa karịa karịa.
A gwakọtara glucose na mkpụrụ ndụ anụ ahụ. Nke a na - eme site na mkpali nke AMPK enzyme nke dị oké mkpa n'inyere ahụ ọkụ aka. Ọganihu nke AMPK na-edugakwa ka a na-etinye sugar karị n'ime mkpụrụ ndụ mmadụ ebe ọ gbajiri iji hapụ ike.
Emechibidoro ihe a na-eme na enzymes a-amylase na a-glucosidase. Ndị a bụ enzymes ndị na-ahụ maka mgbaze nke starch siri ike na ahụ. Ihe nke usoro a pụtara bụ na a na-egbochi imechi ihe nkedo ọbara ọbara na-edochi anya.
2. Mmetụta nsogbu
Ojiji nke Synephrine ga-akpali ọrụ nke alpha 1 na alpha abụọ adrenal receptors, ma nke a na-eme n'ụzọ dị ala karị na ihe nke phenylephrine na ephedrine. Nke a pụtara na ohere nke onye na-enweta ụba obi na-arị elu na ọbara mgbali elu na-ebelata.
Ojiji nke Synephrine ga-eduga n'ịbalite ọrụ nke ndị natara U2 neuromedin neuromedin. Mkpụrụ ndụ ndị a dị na hypothalamus na ụbụrụ mmadụ, ha na-ahụ maka ịchịkwa ụra. Iji Synephrine mee ihe ga-akpali ndị natara nke na-eme ka hypothalamus mee ka mmadụ ghara ịma ụra karịa ogologo oge
3. Ihe ngbochi mkpasu iwe
Ojiji nke Synephrine ga-eme ka ọrụ NF-kB kwụsị. Nke a bụ isi ihe na-akpata ọrịa mkpali ndị dị ka ụkwara ume ọkụ. Ejila Synephrine mee ihe iji metụta ihe nke hormone eotaxin-1 n'ụzọ dị ukwuu. Nke a na-egbochi ijegharị nke eosinophil na mpaghara ọkụ.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị nke ọma gosipụtara site na ịnwale, e jiwo Synephrine mee ihe iji gbochie ihe acetylcholinesterase. A maara nke a na-akpata ọrịa Alzheimer.
Uru nke Synephrine
Ọ bụ ezie na ọgwụ niile nwere mmetụta dị egwu ha, ha ka nwere uru mgbe eji ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. A na-eji synephrine mee ihe dị ka ihe ọzọ na ephedrine. Nke a bụ mgbe nnukwu usoro iwu usoro ọgwụ na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe na-akwado iwu machibido iji ọgwụ ọgwụ ọjọọ eme ihe.
Ihe na-echegbu onwe ya bụ ikike nke ịṅụ ọgwụ ọjọọ nke nwere ike ibili mgbe ị na-eso ephedrine. Ọzọkwa, ephedrine bụ ihe siri ike na-akpali akpali, ọ makwaara ịmalite ọbara mgbali elu. Ya mere, a na-eji Synephrine mee ihe dịka ngbanwe maka ephedrine.
Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime Enwere uru Synephrine a na-edozi nke a iji mezuo mgbe ojiji nke ihe na-akpali akpali:
1. Ọrịa nke Synephrine
Nke a bụ nsogbu doro anya nke ọtụtụ ndị ọrụ ephedrin chọrọ ichota mgbe ha na-aṅụ ọgwụ ahụ amachibidoro iwu. Synephrine dị irè dị ka ephedrine na-enye aka nkwụsị nke oke abụba. Nke a ga - ebute ọnwụ.
Ọgwụ ahụ na - arụkwa ọrụ n'otu aka ahụ site na ime ka mmelite nke ahụ dịkwuo mma. Mgbe nke a mere, ahụ mmadụ na-eme ngwa ngwa, a na-erekwa abụba ndị ọzọ.
Usoro mmebi nke abụba na-enweta site na lipolysis. Nke a na-agụnye mmetụta nke ndị natara na-ahụ na abụba abụba. Nke a ga - eme ka mmebi nsị na - apụta ngwa ngwa karịa ka ọ ga - eme ma ọ bụrụ na onye ahụ ejighị ihe mgbakwunye.
Usoro a nke a na-ewepu abụba ndị na-emebiga ihe ókè na ebe ọ bụ na a na-eme muscle ka a na-akpọ thermogenesis. Ọ bụ usoro ihe omume na-eme ma ọ bụ ezie na ọ dị oke ọsọ ọsọ.
2. Ọnwụ na-efu
Ọtụtụ ndị mmadụ ga-enwe agụụ maka ọ dịkarịa ala ihe na-adịghị nri na-enye aka na ahụike ha. Nke a na-agụnye osisi ndị dị ka ice cream, fries, na kuki. Nri ndị dị otú ahụ bụ ogwu n'anụ ahụ karịsịa nye onye na-ezube ịkwụsị abụba buru ibu.
Nke a bụ n'ihi na oriri dị mma na-achọpụta ọnụego nke abụba ọnwụ. Mgbe a na-ewere ọtụtụ calories, usoro nke ịtụgharị ha na uru karịa abụba na-adọrọ adọrọ maka ahụ.
Mgbe mmadụ na - ewe Synephrine HCL, agụụ na - agwụ ya. Nke a bara uru na ọchịchọ nke onye ahụ na-etinye na nlele. Onye nwere ike ilekwasị anya ugbu a na iri nri ndị ahụ dị mma.
Ya mere, ojiji nke Synephrine dị ka mgbakwunye maka ịchịkwa abụba anụ ahụ n'ime ahụ gị bụ ihe kachasị mma ka ọ ga-eme ka ị nweta nke a n'ụzọ niile.
3. Ọdị mma glucose dị mma
Ojiji nke Synephrine ga-akwalite nlekota nke glucose site n'ahụ. Nke a na-eme n'ụzọ abụọ. Nnukwu glucose nke na-ejide ọbara na-ejide ọbara bụ ihe nwere ike ime.
Iji Synephrine eme ihe ga - eme ka a kpochapụ glucose dị na ọbara ma kpụga ya na akwara skeletal. N'ebe a, glucose nwere ike ịtụgharị uche na uru.
Nke abuo, Synephrine ga-ekwusi ike na ịnyefe glucose na akwara skeletal na-ebute ume na-ewuli elu dị ka shuga ga-agbagha ngwa ngwa. Ike a dị oké egwu maka usoro ụzọ metabolic na-ebu ụgbọala ga-enyere onye ahụ aka ịṅụbiga abụba.
Imeju bụ akụkụ ahụ nke na-adabere na nkwụsị nke abụba echekwara na ahụ. Iji Synephrine emeju umeji ime glycogenesis. Usoro a dị ịrịba ama ga - eme ma ọ bụrụ na ọ dị ntakịrị ngwa ngwa. Ihe HCL Synephrine na-eme bụ imezi usoro nke lipolysis.
5. Na-enyere aka ịchịkwa ọrịa shuga
Mgbe ahụ na-adịghị ngwa ngwa na-ere ọkụ shuga na-emepụta ahụ ma na-agbanwe ya na-aba uru, ohere nke ịrịa ọrịa shuga dị elu. Ojiji nke Synephrine nwere ike ịbụ ihe ngwọta maka ịtọba ọkwa glucose n'ahụ ahụ n'ime oke ikike. Mgbe a na-eji ya eme ihe, ihe mgbakwunye ahụ sitere na mkpụrụ osisi oroma dị arọ na-agba ume ka ndị shuga kwụsị ịhapụ ike.
Ndị na-eji ya anwalewo ọbara shuga dị ala, nke a bụkwa ihe akaebe nke ikike nke ọgwụ ịchịkwa ọrịa shuga.
6. Mma mgbaze
Ndị na-agbakwunye jiri HCL Synephrine enweela mpempe mmiri n'oge oge eji. Ọzọkwa, irè nke ọgwụ na n'ihu a abụghị ndị ọkà mmụta sayensị akwado.
Otú ọ dị, ihe a na-ekwu nwere nkwenye dị elu na-enye na mkpụrụedemede oroma mmanụ nke sitere na Synephrine bụ isi sitere na ya ejirila ya ogologo oge iji chịkwaa ụbụrụ afọ.
7. Mee ka ụbụrụ gwụ tupu ịwa ahụ
E jiribeghị nkà mmụta sayensị gosipụta na ọ bụ eziokwu n'emeghị ka enwe obi abụọ. Otú ọ dị, ndị mmadụ ji Synephrine mee ihe tupu ịwa ịwa ahụ achọpụtala na ọ bụ obere ụjọ. Ọgwụ ahụ na-enyere onye ahụ aka inwe àgwà dị jụụ nke na-achọsi ike karịsịa tupu ịrụ ọrụ dị mkpa.
8. Nwee obi iru ala na ike
Ejila Synephrine mee ka a gbanwee mgbanwe dị iche iche na ike nke mmadụ. Dị ka otu nnyocha e mere si kwuo, a gosipụtara uru a nke ọgwụ ahụ. A na-edozi ụmụ oke na ọnọdụ dịgasị iche iche iji gosi na ọ bụ iji ọgwụ ọjọọ eme ihe.
Nke a kpatara mgbanwe omume na emetụta ọbụna àgwà nri ha. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, a na-etinye ụmụ irighiri mmiri na-edozi ahụ ike na mmiri ma kpalie igwu mmiri n'akụkụ ndị dara mbà n'obi. Umu ndi ahu mesiri ike nwere oke umuaka n'oge a.
A na-etinye ha n'okpuru Synephrine ma mee ka ọrụ ha ka mma. N'otu ụzọ ahụ, ndị ọ bụla ji mgbakwụnye ahụ mee ihe ga-abụ nnukwu mmụọ ma e jiri ya tụnyere ndị na-ejighị ya. Achọpụtawo ike ike nke ndị ọrụ mgbakwunye Synephrine ka a na-eme ka ha dị mma karịa ka ọ dị.
9. Njikwa nje bacteria na-emerụ ahụ
Ụfọdụ ndị na-eji ọgwụ ahụ eme ihe dị ka ọgwụ nje, ọ na-enyekwa aka ruo n'ókè ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, ojiji ya emeela ka ebelata nje bacteria dịka E. coli n'ime ahụ. Enweghi ike iji ọgwụ ọjọọ eme ihe na nke a.
11. Ogbugbu mbufụt
Ihe mgbakwunye ahụ dị nnọọ irè iji belata ihe gbasara nke nwere ike ịmịnye ahụ n'ahụ ahụ. Ọgwụ ndị ahụ na-eme site n'ibilata ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ ndụ na-egbu egbu na cytokines. Nke a na-esote site na mbido nke mkpụrụ ndụ mgbochi na-emetụta ihe mgbochi na mkpụrụ ndụ emetụta.
Ọnụnọ nke ụmụ irighiri ihe ọkụkụ na-eme ka ọtụtụ ọrịa ndị na-efe efe dị ka ụkwara ume ọkụ. Na eji Synephrine enye aka na ibelata ntinye nke NF-kB nke na-emerụ na ọnọdụ ya arụ ọrụ.
O doro anya na ọgwụ ahụ bụ ngbanwe kacha mma maka ephedrin dịka ọ ga-aza ebe niile a kpọtụrụ aha n'elu dịka ihe na-akpali akpali. Ọ na-eme ya n'ụzọ dị ọcha dị ka mmetụta ya dị na ya dị ntakịrị ihe dị njọ ma e jiri ya tụnyere ephedrine nke a maara na ọ ga-eme ka ọbara mgbali elu dị ọbụna mgbe a na-eji ya dị ala.
Maka nsonaazụ kachasị mma, ọ dị mma ka ị zere ịzụrụ ọgwụ sitere n'aka ndị chemists ozugbo. Kama nke ahụ, mmadụ ga-aga ileta onye ọkachamara ruru eru nke ga-enye ndụmọdụ dị mma banyere iji eji ọgwụ ahụ eme ihe n'enweghị nsogbu ma nweta ihe a chọrọ.
Ojiji nke Synephrine na-ejikọta ya na mmetụta dịka ọ bụla ọgwụ ọ bụla. Otú ọ dị, o nwere ike ịbụ na a na-akpọ ha okwu na-adabere na usoro e ji mee ihe.
Mmetụta dị na ya ga-abụkwa nnukwu ihe mgbe mmadụ na-ejikọta Synephrine na caffeine. Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ mmetụta mmetụta HCL Synephrine nke ndị ọrụ nke mgbakwunye ahụ nwere:
Enweghị ihe na-akpali akpali dị ka 100% nchekwa maka ime ka ọbara mgbali elu. Ọ bụ ezie na a na-ewere Synephrine ka ọ bụrụ ihe nchekwa dị mma karịa ephedrine n'ihu a, ọ na-ebutekwa ihe nwere ike ime ka ọbara mgbali elu.
Ihe ize ndụ dị obere. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya izere ịnara mgbakwunye ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọbara mgbali elu.
Dị ka ọ dị na ọbara mgbali elu, a pụghị ilere Synephrine anya dịka ọnyá dị ka ephedrine na-akpata ọrịa obi. Otú ọ dị, ha bụ ohere nke ọnọdụ na-eto eto ma ọ bụ na-arịwanye elu karịsịa ma ọ bụrụ na ejiri ya na caffeine mee ihe.
Ka o sina dị, arụmụka na - aga n'ihu na - enwe ike ịme ka ọ kpata ma ọ bụ kpalite ọrịa obi, yana ụfọdụ ọmụmụ na - egosi na ọ nweghị mmetụta obi ọ bụla ma ọ bụrụ na ejiri naanị ya na caffeine mee ihe.
Ndị na-agba ume na-arụ ọrụ site n'ịba ụba nke usoro ahụ nke metabolic. Na-emekarị, nke a na-esonyere site na mmụba nke ọnụọgụ obi dị ka obi na-agbalị ịmalite ọbara dị ka o kwere omume n'ahụ ahụ. Ojiji nke Synephrine HCL ntụ ntụ nwere ike ime ka mmụba na-arịwanye elu n'obi ọ bụ ezie na nke a adịghị ahụmahụ.
Otú ọ dị, iji ọgwụ na-akpali akpali na ụdị ọgwụ ndị ọzọ dị ka caffeine nwere ike ime ka nsogbu ahụ ka njọ. N'ọnọdụ dị otú ahụ, obi mgbawa nwere ike ịghọ ihe na-adịghị mma, nke a pụkwara ịnwụ n'ihi na ọ nwere ike iduga ọnwụ ma ọ bụrụ na anaghị edozi ya ngwa ngwa.
Ọ dị njọ ma ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe dị elu tupu ịwa ahụ
Ndị ọgwụ a na-eji ọgwụ a eme ihe iji belata nrụrụ aka tupu ịwa ahụ. A na - enwetakarị mmetụta a, mana ọ bụ naanị na nchebe dị oke ala. Mgbe usoro onunu ogugu di elu, ojiji nke Synephrine HCL tupu ịwa ahụ nwere ike ibute ọbara mgbali elu ma ọ bụ jide obi.
Nke a nwere ike ibute ọnwụ ma ọ bụrụ na nsogbu ahụ amalite n'oge ọrụ. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya izere Synephrine ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-akpali tupu ọrụ.
N'ọnọdụ ụfọdụ, dọkịta nwere ike ịdebe ọgwụ iji mee tupu usoro amalite. N'ọnọdụ dị otú ahụ, a ghaghị ime ya n'ụzọ zuru ezu na-agbaso ndụmọdụ ọgwụ ahụ ka ọ ghara ịmalite nsogbu n'oge ọrụ ahụ.
Ojiji nke synephrine dị elu na-eme ka ndị mmadụ nwee obi ụtọ, na-eche na ọ bụ ihe na-akpali akpali.
Mmetụta ndị ọzọ
Ndị na-eji ihe mgbakwunye Synephrine nwere mmetụta ndị ọzọ. Otú ọ dị, ịdị njọ nke mmetụta dịgasị iche site n'otu onye gaa na nke ọzọ ma dabere na ọtụtụ ihe na usoro ọgwụgwọ eji eme ihe bụ isi. Ụfọdụ n'ime mmetụta ndị a gụnyere:
A kọọwokwa ọdịda akụrụ. Otú ọ dị, nke a na-eme kpọmkwem nye ndị nwere nsogbu akụrụ.
Ụkwụ na-egbu. Ihe mgbaàmà a nwere ike ịme mgbagwoju anya na mgbu nke na-akpata nrụgide ahụ ike mgbe a na-eme mgbakọ.
Nke a ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - emebiga ihe ókè ma ọ bụ nchikota na ike ọzọ dị ike.
Otú ọ dị, mmetụta ndị ahụ a kpọtụrụ aha n'elu ga-eme ka ọ ghara ikwe ka onye ọ bụla na-ewere mgbakwụnye ahụ. Nnyocha e mere egosiwo na ihe gbasara ihe gbasara nke ọ bụla n'ime ihe mgbaàmà a na-akpọkarị dị ala ma na-eme mgbe a na-eji nnukwu usoro Synephrine.
Enwere ihe ọmụma gbasara njirisi nke ọgwụ na ndị nne na-enye ara na ndị na-atụ anya. Ya mere ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịghara ịṅụ ọgwụ na oge dịka otu nwere ike ọ gaghị ama ihe ga - emepe mgbe o jiri ya.
A na-atụ aro iji ọgwụgwọ Synephrine
Synephrine dị na ọtụtụ nwelite nke ozuzu dị iche iche na-adabere na mmasị onye ọrụ ahụ. Ọgwụgwọ kachasị ejiji bụ banyere 100mg kwa ụbọchị. A na-ele nke a anya dị ka ogwu zuru ezu nke nwere ike ịmelata ọnwụ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị mmadụ na-etinyekarị ihe ndị ahụ a kpọtụrụ aha n'elu Synephrine usoro onunu, ọ na-abụkarị na njedebe kachasị elu nke ihe a na-atụle na ọ ga-emetụta onye ọrụ ahụ. Azu ogwu nke dị ka ihe dị ka 30mg zuru oke maka ndị na-amalite.
Maka ndị na-eji mgbakwụnye ahụ na ihe ndị ọzọ na-akpali akpali, a ghaghị idebe usoro ọgwụgwọ ahụ dị ala karịa o kwere omume maka ebumnuche ncheta. Nke a bụ n'ihi na iji Synephrine tinyere ihe na-akpali akpali dị ka caffeine nwere ike ịkọwa onye ọrụ ahụ na ọbara mgbali elu na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu. Ọ bụ ezie na, dịka e kwuru na mbụ, nke a bụ isiokwu na-arụ ụka.
Ọnụahịa a tụrụ aro na ọbụlagodi ndị ọrụ nwere ike ịdaba bụ 200mg kwa ụbọchị. A na-ewere ihe ọ bụla dị n'elu akara a dị ka ọnya na-egbu egbu nakwa na ọ ga-etinye onye ahụ n'ihe ize ndụ nke ịnweta raft nke mmetụta dị egwu na-emetụta ihe ndị na-akpali akpali. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya, iji malite, 10 ka 20mg iji hụ na Synephrine bụ ihe jikọrọ ya na ahụ gị.
Mgbe ị gụchara ụbụrụ mbụ a, ị kwesịrị iwepụta oge iji chọpụta nzaghachi nke ahụ na mgbakwunye ahụ. Ọ bụrụ na ihe niile dị mma, a ga-agbakwụnye usoro nke abụọ banyere 20mg mgbe awa abụọ gasịrị.
Oge nke kachasị dị nchebe na-ewere ọgwụ ozugbo n'otu awa abụọ. Otú ọ dị, ọ bụ ihe amamihe dị na ya izere ịṅụ ọgwụ ahụ ihe dị ka awa anọ tupu ụra. Ihe mgbakwunye ahụ na-ewe ihe dị ka elekere abụọ ka ọ dị irè na ahụ.
Ya mere, na-ewere Synephrine ka ị na-ehi ụra na ụra nwere ike imebi ahụ gị. O nwere ike ị gaghị enwe ike ijide ụra.
Na-eji usoro ọgwụ synephrine ziri ezi maka ọnwụ
Isi isiokwu maka mkparịta ụka: Synephrine vs Caffeine
Ọ bụ Synephrine / caffeine dị mma?
Mgbe e gwusiri, Synephrine na-eme ka ahụ na-agwụ aghara mgbe caffeine na-eme ka mmadụ bụrụ onye anya. Ụfọdụ ihe mgbakwunye nwere caffeine na Synephrine dị ka ihe ha na-eme iji nye uru nke abụọ ahụ.
Ka o sina dị, arụmụka na-aga n'ihu na-aga n'ihu Synephrine na Caffeine; eji Synephrine na caffeine. Ụfọdụ nnyocha na-egosi na ngwakọta nke abụọ ahụ nwere ike ịkwụsị ịmị ọgwụ yiri nke ephedrine, na mmetụta ndị metụtara ọgwụ a na-enwetakwa n'ihi ngwakọta.
Nyocha ahụike nke Finland na Germany kwuru n'oge na-adịbeghị anya gosiri na nchịkọta nke Synephrine na caffeine nwere ike ime ka nsogbu na-arịwanye elu nke ọbara mgbali elu na ọnye obi. N'ihe ndekọ ahụ, ụfọdụ ụlọ ọrụ gọọmentị Europe nyere iwu ka ha wepụ ihe mgbakwunye na ngwakọta nke mbubata abụọ sitere n'ahịa ahụ n'ihi nchedo nchedo ahụike.
N'aka nke ọzọ, ụfọdụ ọmụmụ, dịka ọmụmaatụ BfR Nkọwa Nke 004 / 2013 a kpọrọ "Ntụle Ahụike nke Egwuregwu na Ọrịa Loss Ngwaọrụ Nwere Synephrine na Caffeine", achọpụtala na Synephrine enweghị mmetụta obi ọ bụla ma ọ bụrụ na ejiri naanị ya ma ọ bụ na caffeine.
Synephrine na caffeine na-enye otu uru ahụ?
Ọzọkwa, e nwere akụkụ nke ndị kwenyere na Synephrine na caffeine na-enye otu uru ahụ. Otú ọ dị, ọ dị mma ịmara na ọ bụ ezie na ha abụọ na-akpali akpali, ọrụ ha dị iche iche, ya bụ, mmetụta ha.
Caffeine na-emetụta usoro nchebe nke etiti, usoro nchịkwa na usoro ọbara. Ihe si na caffeine mee ihe na-agụnye nche anya, edemede na obi iru ala. Mmetụta ya na-agụnye jitters, isi ọwụwa, nchekasị na mgbakasị.
N'aka nke ọzọ, Synephrine kacha emetụta ahụ mgbu nke ahụ gị, na-eme ka ụba mgbatị, ike mmefu na ike.
Ya mere, Synephrine na caffeine bụ ihe dị iche iche dị iche iche dị iche iche na-enwe mmetụta dịgasị iche.
Ịzụta Ihe Mgbakwunye Synephrine Ntanetị
Ị nwere mkpa mgbakwunye Synephrine? Ozi ọma ahụ bụ na ị zụrụ Synephrine online, na n'aka nke ọzọ, ọ dị mwute ikwu na enwere ihe mgbakwunye ndị dị na ntanetị nakwa na ị nwere ike ọ gaghị adị mfe ịkọwa ha na ndị ezigbo.
Dị ka ndị dị otú a, ọ bụ ihe kachasị mkpa na ịzụta ihe mgbakwunye Synephrine site n'aka onye na-ere ere n'ịntanetị, ọkacha mma Phcoker.com.
Nke a bụ ụzọ dị mfe ị ga-esi zụrụ Synephrine si Phcoker.com:
Jupụta ngwa ngwa ịzụta n'ụzọ ziri ezi ma nyefee
Ọ bụrụ na achọrọ ka ị jupụta ajụjụ dị mkpirikpi nkenke, mee ya ma dozie ya. Onye ọkachamara Phcoker ga-eji ụdị ahụ mejupụtara iji kwado ma ị ga-akwado usoro gị.
Dee maka iwu ozugbo a kwadoro ya.
Chere maka ihe mgbakwunye a ga - enye gị (maka ihe karịrị ụbọchị atọ ma ọ bụrụ na ị nọ na United States)
Ị hụrụ otú ọ dị mfe ịzụta Synephrine online?
Otú ọ dị, tupu ịzụta ihe mgbakwunye ahụ, ọ ga-adị mma ka ị gwa onye ọkachamara nlekọta ahụike maka ndụmọdụ maka ọgwụ kwesịrị ekwesị iji mee ihe ma kpebisie ike ma ọ bụrụ na ihe ahụ na-akpali akpali ga-adị mma maka gị. Onye ọkachamara ga-enye gị ndụmọdụ na ọgwụ kwesịrị ekwesị iji were na ohere ịmepụta mmetụta ndị dị na ya ma ọ bụrụ na ị na-etinye mgbakwụnye ahụ.
mmechi na Synephrine (5985-28-4)
Na mkpuru okwu, Synephrine na-akọrọ niile igbe nke mgbakwunye zuru oke maka iji belata oke. O nwere mmetụta dị oke nro, nke a na-emekwa ka ọ bụrụ ihe nkwado kacha mma maka onye ọ bụla na-eme egwuregwu nke na-ezube ime ka ike ha dị elu n'oge a na-eme mgbatị. Ọ na-anọchi anya ephedrin a na-achọsi ike nke ukwuu ma mee ka ọ dịkwuo mma maka inweta elu dị elu n'enweghị ihe ize ndụ nke ịmepụta ọbara mgbali elu.
Akhlaghi, M., Shabanian, G., Rafieian-Kopaei, M., Parvin, N., Saadat, M., na Akhlaghi, M. Citrus aurantium okooko osisi na nchekasị. Rev Bras.Anestesiol. 2011; 61 (6): 702-712.
Bent, S., Padula, A., na Neuhaus, J. Nchebe na ịrụ ọrụ nke citrus aurantium maka ọnwụ ọnwụ. Am.J.Cardiol. 11-15-2004; 94 (10): 1359-1361
Campbell-Tofte, JI, Molgaard, P., Josefsen, K., Abdallah, Z., Hansen, SH, Cornett, C., Mu, H., Richter, EA, Petersen, HW, Norregaard, JC, na Winther, K. Nnyocha na-ahụ maka ọgwụ nchekwa na ịrịa ọrịa shuga na-arụ ọrụ banyere ọgwụ nchekwa na ọgwụgwọ ọrịa Rauvolfia-Citrus, dị ka a na-eji mee ihe na nkà mmụta ọgwụ ọdịnala nke Nigeria. J Ethnopharmacol. 1-27-2011; 133 (2): 402-411.
R. Costa, MBA Glória, na Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition (Nke abụọ Edition), 2003
Ghanim H, Sai CL, Upadhyay M. et al. Mmiri ihe ọṅụṅụ na-ekpochapụ mmetụta nke protinflammatory nke nnukwu abụba, nri dị elu-carbohydrate ma gbochie mmụba endotoxin na nkwupụta ụda olu dịka ntanetị. Amer J Clin Nutr. 2010; 91: 940-949
Stohs SJ. Nyocha nke akụkọ mmemme ndị metụtara Citrus aurantium(ogbe oroma) site na April 2004 ruo October 2009.
Dragull K, Breksa AP, Ken B. Synephrine ọdịnaya nke ihe ọṅụṅụ si Satsuma mandarins (Citrus unshiuMarcovitch). J Agric.Food Chem. 2008; 56: 8874-8878
Roman MC, Betz JM, Hildets J. Nkọwapụta nke synephrine na ihe ndị na-agba mmanụ mmanye dị arọ, ihe ndapụta, na ihe mgbakwunye ihe ọṅụṅụ site na mmiri chromatography mmiri na nchọpụta ultraviolet: nkwalite otu ụlọ akwụkwọ. J Amer Org Anal Chemists Int. 2007; 90: 68-81
Mercolini L, Mandrioli R, Trere T. et al. Akwukwo nso nke ugbo nke ndi amine adrenergic di iche iche Citrus aurantiummkpụrụ osisi na ihe oriri. J Sep Sci. 2010; 32: 1-8
Haaz S, Fontaine KR, Cutter G, Limdi N. et al. Citrus aurantiumna synephrine alkaloids n'ịgwọ oke oke na oke ibu: mmelite. Ibu Oké Nkume. 2006; 7: 79-88
Higgins, JP, Tuttle, TD, na Higgins, CL Energy ihe ọṅụṅụ: ọdịnaya na nchekwa. Mayo Clin Proc. 2010; 85 (11): 1033-1041.
Kaats, GR, Miller, H., Preuss, HG, na Stohs, SJ A 60day abụọ kpuru ìsì, ebe nchekwa nchebe nke ebebo nke Citrus aurantium (oroma oroma) wepụ. Food Chem Toxicol. 2013; 55: 358-362.
Lynch B. Nyocha maka nchekwa nke p-synephrine na caffeine. Okwu Intertek-Cantox, 2013; 1-20.
Nyocha ahụike nke egwuregwu na ihe ndị na-akpata ọnwụ nke nwere synephrine na caffeine BfROpinion Nr. 004 / 2013, nke 16 November 2012
Iwere Vardenafil (LEVITRA) maka Erectile Dysfunction
Yohimbine: Na-eji mmetụta + Yohimbine na-ere